5 देशहरू तपाईंले भारतबाट भिसा नि: शुल्क भ्रमण लिन सक्नुहुनेछ
एक यात्रा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य संधै एक रोमाञ्चक अनुभव हो तर यदि तपाई हो भने जुन समय र ऊर्जा भिसा आवेदन प्रक्रियाहरु ले पूर्ण रुपमा बन्द हुन्छ, यी देशहरूले भारतीय नागरिकहरूको भिसाको आवश्यकता पर्दैन र तपाईं समयको हिसाबले जहाँ जहाँ तपाईं जाने निर्णय गर्नुहुन्छ यी अद्भुत स्थानहरू। यहाँ छन्5देशहरु तपाईं कलेज एक भिषा फ्री टूर भारत बाट।
भारतीयहरू मकामा बिना भिसा बिना 30 दिनसम्म रहन सक्छन्। मकाउ केवल 500,000 को सानो जनसंख्या संग एक सानो स्थान हो। मकाउ एक धेरै रोचक स्थान हो। चिनियाँ र पश्चिमी शैलीमा धेरै चर्चहरू र थुप्रै क्यासिनोहरू शहरमा सहभागी हुन्छन्। मकाउ एक जीवंत शहर हो जसले सबैभन्दा अधिक ऊर्जावान र उत्साहजनक अनुभवहरू भरिएको छ। यसको भोजन, संस्कृति, मानिसहरु, वास्तुकला र स्थानहरू भयानक भय आकर्षित गर्छन् र अचम्म लाग्छ। यस खूबसूरत शहर भिसाको कुनै पनि परेशानी बिना आनन्द लिनुहोस्।
मरीशस भारतबाट सजिलै सुलभ छ र पारिवारिक यात्रा र जोडेहरूको लागि उत्कृष्ट स्थान हो। मरिशस आफ्नो रेतीली समुद्र तट र सफा पानीको साथ अर्को द्वीप देश जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यो भन्दा धेरै धेरै हो। एक सानो देश, केवल 1.5 को दिल्लीको आकारको बारेमा, तपाईं अचम्म लाग्न सक्नुहुनेछ जुन सबैले यहाँ अनुभव गर्न सक्दछ। तपाईं 60 दिनको लागि वीजा बिना यो सुन्दर देश भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ! (तपाईंको फिर्ती टिकट भएको छ)
आह! भूमि जहाँ बॉब मार्ले जन्मिएको थियो। तर, जमैकामा त्यहाँ धेरै बढि छ। नृत्य हॉल पार्टीहरू जमैकालाई सताउन सजिलो प्राकृतिक चमत्कारबाट यो सबै छन्। जमैकामा, तपाईं किंग्स्टन नजिकै ब्लू पर्वतबाट सबै प्रकारका भू-भागहरू डन्न्स नदीमा ओओको रियोस जस्ता विशाल पानीको खोजी गर्नुहुनेछ। तपाईं यस देश भिषा-30 दिन सम्म निःशुल्क हेर्न सक्नुहुन्छ।
विश्वास गर्नुहोस् जब मैले यो भन्छु मालदीव न केवल हनीमून को लागि तर वास्तव मा सबै को लागि एक गन्तव्य हो। तपाई त्यहाँ त्यहाँ गतिविधिहरूको अनन्त सूची फेला पार्नुहुनेछ जुन तपाईले उमेर र चासोहरू बिना प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ र, महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईं कहिल्यै ऊब हुनुहुँदैन! यस सुन्दर द्वीप देश को खोज गर्न भारतीय नागरिकों को वीजा को आवश्यकता छैन।
हो, हांगकांगले भारतीय पासपोर्ट धारकहरूको लागि 14 दिनको वीजा-रहित अवस्थित अवधि छ भने तपाई हङकङलाई भारतबाट सीधा उडान गर्दै हुनुहुन्छ। हांगकांग एक सबैभन्दा चिसो एशियाई देश हो र एक सुन्दर जीवनशैली हो र यो श्रोताहरूको लागि उत्कृष्ट स्थान हो। हङकङ्गको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा हो कि यो परिवार र साथी दुवैको साथ आनन्दित हुन सक्छ र 14 दिन यो प्रस्ताव को लागी को लागी पर्याप्त को लागी अधिक भन्दा अधिक छ। हांगकांग भारतमा सबै प्रमुख विमानस्थलहरू मार्फत जोडिएको छ।
5 कारण किन नेपाल यात्राको यात्रा लिँदै तपाईंको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सक्छ
दिलचस्प तथ्याङ्कहरू, यदि तपाईं दक्षिणपूर्वी एशिया टूर लिइरहनुभएको छ